Ulwaphulo-mthetho kunjalo ke yinkqubo oko kukuthi initiated kwi-osemthethweni iintlobo kwi-ukufunyaniswa ka-imiqondiso a ulwaphulo-mthetho. Iqala nge wangaphambili imveliso. Ngelishwa, ulwaphulo-mthetho iimeko, kwezinye iimeko, kukho wenziwe a ukwaphulwa komthetho yamalungelo oluntu. Ngoko ke, uninzi kakuhle indlela ukuqinisekisa ilungelo nkqo ekukhuseleni ilungelo ukuba suspect, umtyholwa okanye defendant ngu abakwicandelo, ulwaphulo-mthetho unobumba umntu ingcebiso.
I-experienced lamagqwetha iya kuba okwenene, uncedo, njengoko ngenxa psychological usamuel yintsholongwane arrest kwaye arraignment, kwaye kanjalo ngenxa isemthethweni ukungakwazi ukusebenza kwezi abantu bamele ayikwazi ukuba ikhusele kwezabo procedural umthetho, ingakumbi xa ufuna kwi-custody.
Nomthetho wethu-office kwi-mthetho iimeko ingaba iqela abaqondisi-mthetho kuba United ngaphakathi efanayo elinolwazi sephondo, yolwaphulo-mthetho, kwaye ngokucacileyo ngu a structural subdivision le imali ye-United Collegium of advocates. Omnye engundoqo okuninzi ye-Bureau, besebenza, ulwaphulo-mthetho iimeko, yi iqela le experienced iingcali, ukusebenza ngomhla othile inkangeleko kunye rewards ye-asemthethweni asekuhlaleni. Elungileyo defender ukuba iyahambelana inkangeleko kwetyala (ethile inqaku), uza kukubonelela defendant a ngaphezulu kulo nyaka umyalelo wokhuselo.
ZINOKUPHATHWA UMGCA WE ABAQONDISI-MTHETHO JIKELELE IKLOKO